नेपालमा किन भा’इरल भइरहेका छन् त का'ण्ड ? - Nawalpur Dainik
नेपालमा किन भा’इरल भइरहेका छन् त का’ण्ड ?
March 25, 2021 by Nawalpur Dainik
केही दिन अगाडि सामाजिक संजालमा ‘अष्ट्रेलिया काण्ड’को नामले एक अ’श्लिल भिडियो भाइरल भयो । अष्ट्रेलियामा रहेकी युवतीको भनिएको उक्त भिडियो धेरैले हेर्न भ्याए ।
तर, सत्य अर्कै रहेछ । उक्त अ’श्लिल भिडियो अष्ट्रेलियामा रहेकी चेली होइन रहेछ । न भिडियो नै अष्ट्रेलियामा बनेको होस् । उक्त भिडियो केही समय अगाडि नै एक अ’श्लिल साइटमा आइसकेको रहेछ । उक्त युवती पो’र्नस्टार बन्ने लक्ष्यमा रहिछिन् । उनका केही अन्य भिडियोहरु पनि उक्त साइटमा भेटियो । यो का’ण्ड गतल सावित भयो । तर, यस्ता काण्डहरु नआएका भने होइनन् । केही समय अगाडिमात्र ‘जापान काण्ड’ निकै भाइरल भएको थियो । जापानमा रहेका नेपालीहरुले यौ’न स’म्पर्क गरेको भिडियो जापान का’ण्डको रुपमा भाइरल भएको थियो ।
उनीहरुलाई आफ्नै इच्छाले भिडियो खिचेका थिए । उनीहरुलाई के पत्तो उक्त भिडियो लिक होला र यत्तिका भाइरल होला । पछि भाइरल भएपछि उक्त जोडी फेसबुक लाइभमा आएर माफी समेत मागे । र आफूहरु प्रेमी-प्रेमिका रहेको स्विकारे ।
अ’श्लिल साइटमा गएर ‘का’ण्ड’ खोज्ने हो भने धेरै नेपाली काण्डहरु त्यहाँ भेटिन्छ । बस का’ण्ड, धरान का’ण्ड, ठमेल का’ण्ड, पोखरा का’ण्ड, कलेज का’ण्ड । आदि इत्यादी नामका धेरै त्यस्ता अ’श्लिल भिडियोहरु सार्वजनिक भएका छन् । जुन उनीहरुले रमाइलोको लागि खिचेका हुन्छन् र त्यहाँ आइसकेको पत्तो पाएका हुदैँनन् ।
यस कुरामा नेपाली सेलिब्रेटीहरु पनि मुछिएका छन् ।
अ’श्लिल चलचित्र हेर्ने जो कोहीलाई पनि आफ्नो पनि भिडियो हेर्ने रहर हुन्छ । रहरै रहरमा उनीहरुले भिडियो खिच्छन् । त्यहाँ सर्त हुन्छ, ‘हेरेपछि डिलिट गर्ने’ । तर, सबैले उक्त बुद्धि पुर्‍याउदैनन् । पछि हेर्न हुन्छ भन्दै राख्दा कतिबेला कसको हातमा पुग्छ र लिक हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरुको ध्यान नै हुदैँन् । आफूले ख्याल नगर्दा उनीहरु का’ण्डमा मुछिन्छन् ।
अर्को थाहै नदिई भिडियो खिच्नेहरु पनि हुन्छन् । पछि ब्या’कमेलिङ गर्नको लागि उनीहरुले पत्तै नदिई भिडियो खिचेका हुन्छन् । उनीहरुबीच केही वि’वाद भइहाल्यो भने उक्त भिडियो सार्वजनिक गर्दिन्छन् र भाइरल बनाइदिन्छन् ।
यस्ता कुराहरुबाट बच्न आफैँ चनाखो हुन जरुरी हुन्छ । यदी आफू सचेत हुने हो भने यस्ता घट’नाहरुबाट बच्न सकिन्छ ।
Posted in पत्रपत्रिकाबाट, मनोरन्जन, विचार/ब्लग
Prevसाउदीमै पसिना बगाउँदै थिए श्रीमान , फेसबुकमा अचा’नक आफ्नी श्रीमतीले अर्कै संग बिहे गरेको फोटो देखेपछी (हेर्नुस भिडियो)
Nextकाठमाडौं भेटिएकी करोडपतिकी पत्नी भन्छिन्, श्रीमानले मेरा इच्छा पुरा गरेनन्